Voatavo | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Fambolena sy fikarakarana tsangambato beninkaz ao amin'ny zaridaina
Beninkaz na rongony fanosotra - solontenam-panjakana mazava tsara ao amin'ny fianakaviana croquin. Ny ankamaroany dia mamboly ao Indonezia, Shina, Amerika Latina. Na dia izany aza, zavamaniry iray tsy dia mazava loatra ny beninkaz, noho izany dia azo ambolena ny mpamboly amin'ny fambolena. Fantatrao ve? Ny legioma dia ampiasaina amin'ny mpanasitrana Shinoa amin'ny fanafody aretina maro.
Famaritana sy sary avy amin'ny karazam-boankazo durum
Inona ihany ny pumpkins tsy mitranga: mitongilana sy boribory, mavomavo manga sy mavo ary marevaka, marevaka sy matevina, amin'ny endriky ny sokatra sy ny serpentine. Ny karazam-karazany sy ny karazan-tsakafon'io legioma io dia mahavariana fotsiny, ary ny mpikaroka dia mahita fa sarotra kokoa ny manao safidy. Ahoana ny fomba hanatonana ny safidin'ny vonomoka, inona ireo karazany sy ireo karazany, hambara ato amin'ity lahatsoratra ity.
Toetran-tsakafo mahasoa sy manasitrana
Pumpkin dia malaza any amin'ny firenena maro. Mihalehibe izy io hatramin'izao. Voly maro no ankafizin'ny fikarakarana sy fanangonam-bokatra. Mandritra izany fotoana izany, ny toeram-pambolena dia manana karazana fanafody marobe. Avy amin'ilay lahatsoratra dia hianatra ny singa simika misy ny voankazo, inona no fitrangan'ny kisendrasendra sy ny fanoherana ny fampiasana azy.
Lisitry ny karazana lagenaria mahazatra indrindra (anarana sy sary)
Androany dia hampahafantarintsika ny Lagenariya. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia tsy afaka mamaky fampahalalana mahaliana momba ny karazana lagenariya ianao, fa koa ny karazana zavamaniry hafahafa ao amin'ny sary. Ny zavamaniry Lagenaria dia an'ny fianakaviana Pumpkin, araka ny asehon'ny voankazon'ny kolontsaina. Zavamaniry misy lianoid izay mitombo avy any amin'ny tany tropikaly.
Ny fepetra fitsangatsanganana amin'ny ririnina amin'ny ririnina, ny fomba fitehirizana ny legioma hatramin'ny lohataona
Androany dia misy vary maro karazana isan-karazany, ny tsirairay dia afaka misafidy ny hanandrana ny karazam-bary hitombo. Ny fanontaniana fotsiny dia ny fitehirizana ny voankazo tsara sy mahasalama. Mandra-pahoviana ary amin'ny toe-javatra inona no azon'izy ireo tahirizina, inona ireo karazana no tena mifanaraka amin'izany - ho hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Ny karazam-pokontany tena tsara indrindra ho an'ny fametrahana ireo mpamboly efa za-draharaha dia miantso ireto manaraka ireto ary mety tsara amin'ny fametrahana karazana ririnina: "Kherson".
Mofomamy mofomamy mamy
Pumpkin dia fantatra sy tia ny maro. Pumpkin sype, casseroles, cereals, pancakes and pancakes - ny sakafo rehetra ary tsy lisitra. Manolotra anao fomba fikarakarana mahafinaritra mahatalanjona miaraka amin'ny ririnina ianao, izany hoe mofomamy. Tandindomin-doza mahavokatra tantely Fantatra fa nanomboka nitombo 5000 taona lasa ny Indiana avy any Amerika Atsimo, ary tamin'ny taonjato faha-16 dia nentina tany amin'ny faritry ny Fanjakana Rosiana.
Pumpkin seed oil: ny zavatra tsara sy ny fomba itondrany, ny fomba fampiasana sy fampiasana
Ny menaka pumpkin dia ahitana zavatra maro izay tsy maintsy ilaina ho an'ny vatan'olombelona. Ity vokatra ity dia azo avy amin'ny voan-tsimparifary amin'ny tsindry mangatsiaka. Amin'ny alalan'ny fomba mahomby, ny vokatra vokariny dia mitazona ireo vitaminina sy mineraly faran'izay sarobidy indrindra. Vokatry ny familiana, misy ranon-tsavonavona mainty misy volom-borona vita amin'ny volamena, ary indraindray dia antsoina hoe "volamena mainty" izy io.
Ny mahasoa sy ny fomba handrahoan'ilay ranom-boankazo ao an-trano
Ny siramamy sambony dia fisotro madio ho an'ny fahasalamana tsara. Manatsara ny vatana amin'ny vitamina izy, manasitrana aretina sasany ary manampy amin'ny fitazonana ilay endrika amin'ny endrika ambony. Ary raha manomana azy amin'ny ririnina, mampifamatotra azy amin'ny paoma, karaoty, orana sy voankazo hafa - tsy dia mampatahotra loatra ny olana amin'ny tsy fahampian'ny hery.
Fiompiana koban-kiraro: resipeo amin'ny ririnina
Raha manontany olon-dehibe na ankizy ianao mba hanao compote, dia ho renao tokoa ny valiny momba ny voankazo sy ny voankazo. Alao sary an-tsaina anefa fa azo atao tsara ny manamboatra legioma, ary ny tsara indrindra amin'izy ireo dia pumpkin. Andramo izany - angamba ity fisotroana ity dia hampidirina ao amin'ny menuo ho toy ny iray amin'ireo olon-tianao indrindra.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Voatavo